musha > Travel Europe > Best Water Parks In Europe For A Vacation
Hapana inoti zororo kana zororo, zvikuru sezvinoita mvura paki, regai unofunga? mushana, aizi kirimu, uye zvishoma nezvishoma mumatope pasi dzimwe hombe mvura emasiraidhi ndiye yokuwana zvokungonakidzwa panguva Summer Holidays! Isu vakaita rokubvisa basa anoedza vanhu Best Water Parks mu Europe isu kukupai yakarurama zvikuru nhau pamusoro pavo kuti zvataigona! Heano yakanaka mvura mumapaki mu Europe iwe nemhuri yako kunakidzwa.
Lalandia - Billund, Dhenimaki
In mafungiro vamwe Nordic ushingi? Buda Lalandia, guru mvura Park mu dzekuma Scandinavia, uye mumwe Best Water Parks mu Europe. Yaiva munhu pakusarudza masiraidhi mhuri-ushamwari, isu kunyanya vanoda Octopus tasva! zera redu rinoratidza kunyange kana rinotevera anoratidza pane yatakanyora pasi pamusoro paka ichi ndiyo huru madziva uye rinotyisa simbe rukova!
Vhura ichi rwendo kuva dzidzo mumwe zvakare. Kids zvichaita rumbidza ari Cave Pool, apo vanogona kuchengeta nekorari kumboongororwa uye hove zvekumwe. Kwete chaizvo pamusoro Octopus? Ipapo uyu achaita vanofadza chinoshamisira yako; Vabereki kwazvo kutandara anogona kufema nyore ari aromatherapy saunas! chibozwa! Regai vana vanonakidzwa ari Aqua Splash mvura nhandare, iyo Monky Tonky yemukati yekutamba, kana kuenda bowling iwe uchinonoka.
Kunewo chiduku mvura emasiraidhi shanu nokuda vanoda mvura shoma. bhonasi: Lalandia iri muna Billund, apo LEGOLAND nderimwe rakakura mhuri SWEDERA!
Tropical Island AMAZONIA - Brandenburg, Jerimani
Tiri sezvo kushamisika sezvo imi kuti takawana vamwe Best Water Parks muEurope munyika kuti kazhinji vanoguma ari coldest pamusoro zvakanakisisa chando mwedzi. Tropical Island AMAZONIA muBrandenburg, Jerimani hakuna zvimwemo.
Zvayaiva inenge yeawa ngarurege kubva Central Station muBerlin, Tropical Island AMAZONIA ndiyo hombe 35,000 akaenzana-mita mvura-kunonakidza-paradhiso. Best zvose? Zvine yakazaruka gore rose! Hongu, chinhu mana mwaka indoor-Outdoor South Pacific-music udo! It ine 27-mita-soro mvura-ondomoka shongwe, imwe indoor Ocean, nenharo the lagoon, uye kiddie dziva rine tafura mvura mutambo.
Waneta kuva nyoro asi vachiri kuda unakirwe? Kwete kunetseka, kusaina pamusana ose Mini-gorofu kana kutora mhepo chibharuma tasva. mhuri Nature-rudo achawanawo mupaka yacho indoor mvura-dondo, iyo inobudisa 50,000 miti pasi pose. Sezvo navazhinji mvura mumapaki isu wamasarudza, pane chinhu nokuda vabereki, wo! Ko munhu kutaura sefuro loungers uye masaja madziva? isu Count mu!
It wokutanga uye kupfuura mvura-music paka muFrance, iri mu Provence nharaunda, pedyo Avignon, rinogona imi Vatasvi mhuri, nzvimbo vana vadiki, siyana mvura nemasiraidhi, rwizi rukuru kukura mune Europe, uyewo guru egungwa Simulator munyika. mvura iyi paki yakazarukira munguva mwaka yezhizha (kubva June kusvika September) uye zvakare akakodzera vanhu vakaremara.
How to reach Splash World WvaAteri Park?
Splashworld riri 17 ? km kubva Avignon, izvo zvinoita nyore! wo, ari pedyo ari chemabhazi unobatanidza mvura Park pamwe chitima ravarwi Avignon, zvinoita kuti avo parwendo nebhazi kana chitima nezvimwe Nzvimbo muFrance kusvika Splashworld nekukurumidza!
15 wepa 17 madziva anosvinurira gore rose uye mumwe guru indoor madziva zvakabatana huru panze dziva uyewo akazaruka rose gore. Dziva remafungu uye dziva rekushambira kumutsa mamiriro e yegungwa mazororo. The egungwa dziva riri hombe! Rinogona kushandiswa chaizvo mapuranga akagadzirirwa indoor kushandiswa uyewo kwako bhodhi.
Kana uri kutsvaka vamwe muviri kune 25 M (82 Ft) pool uye 3 M (10 Ft) Diving shongwe. The indoor ushingi dziva zvinowanika 11 nemasiraidhi ane zvachose kureba kusvika 1 ? km (0,6 zvemakiromita). The soro yemasiraidhi anotora iwe pasi chinofadza kukwira kubva 17 M (55 Ft). wo, pane yakafarikana yemasiraidhi kusvika matatu vanhu parutivi uyewo hanyanisi ondomoka uye 180 M (590 Ft) refu gomo rwizi, flanked pamwe poromoka matombo, kana uchinzwa zvarisingazivi.
Roni kuenda kuAvignon neTreni
Paris kuna Avignon Zvitima
Nice kuna Avignon Zvitima
MuMarseilles kuna Avignon Zvitima
Our Favorite Pick nokuda Best Water Parks mu Europe ndiyo: Water Park Caneva World, Itari
Lake Garda rikurumbire norugare rwaro uye norunyararo, asi Caneva World here rinodederesa zvinhu. This double whammy of a theme paki rakakamurwa pakati peMovieland neAququapark.
Get pedyo Action kufirimu pamusoro Overdrive Live Set, ngariremberere pana zvigaro zvako panguva John Rambo asakura Show, zvino misa kusatenda zvose panguva Illusionist ratidza. Pane anokwira vose mhuri, kubva mijaho mvura Kitt Super Jet, kune vanongomhanyirira dzakakwirira Hollywood Action Tower uye zvinotyisa Diabolik Invertigo munzeerere.
Kana zvose kuti chiito anowana zvishoma zvokutadza inopisa, svetuka kupinda Caneva Aquapark utambanudzire pasi remichindwe, mumumvuri wegomo guru! Asi kukuru chinozunguzirwa dziva uye zvinoshamisa mvura nemasiraidhi kufanana Twin nenhongonya, Anaconda uye Sherry pane zvakawanda kukuyedza kure pamhenderekedzo.
The varaidzo mberi panguva Medieval Times Restaurant & Show – gadzai pachako pasi ari Ages kasitoro uye agadzirire Knights, mabhiza, uye mukuru jousting mutambo!
Akagadzirira arongedze swimsuit yako kuenda rwendo kuwana The Best Water Parks mu Europe? Heck ehe! Nhau dzakanakisa izvozvi, unogona kuwana zvose nzvimbo izvi nyore achibatsirwa SaveATrain ! With hapana chakavigwa mamwe mari, uchawana zvakawanda kupedza pamusoro Vatasvi zvikuru uye nguva dzakanaka! Book kuti Summer pazororo, ikozvino!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-water-parks-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / ja kuti / on kana / of uye mimwe mitauro.
#summertrip #summerwaterpark #waterparks europetravel yemhuri zororo